Raw Estradiol Benzoate ntụ ntụ (50-50-0) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Estradiol ntụ ntụ Usoro / Estradiol Benzoate ntụ ntụ
SKU: 50-50-0. Categories: Estradiol ntụ ntụ Usoro, Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Estradiol Benzoate ntụ ntụ (50-50-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Usoro ọgwụgwọ nke estradiol benzoate yiri otu nke estradiol na estrogens ndị ọzọ. Otu ihe atụ nke ihe na-egosi ọgwụ bụ ọgwụgwọ ngbanwe nke hormone maka mgbaàmà nke menopausal ma ọ bụ hypoestrogenism.
Estradiol Benzoate ntụ ntụ video
Raw Estradiol Benzoate ntụ ntụ isi agwa
aha: Estradiol Benzoate
Molekụla Formula: C25H28O3
Ọbara arọ: 376.488
Melt Point: 191-198 ° C
Raw Estradiol Benzoate ntụ ntụ eji mee ihe na steroid
Estradiol benzoate (CAS 50-50-0) (EB, E2B) (INN) (aha aha Progynon-B, ọtụtụ ndị ọzọ), ma ọ bụ oestradiol benzoate (BAN), bụ ihe synthetic, estrogen etro ester.
Raw Estradiol Benzoate ntụ ntụ Usage
A chọpụtara otu ihe nke 2.5 mg estradiol benzoate site na intramuscular injection iji mepụta ọkwa plasma estradiol nke> 400 pg / mL, tụnyere 24 awa mgbe ọ kwụsịchara, n'ime ìgwè ndị ọrịa nwere ntakịrị ọkwa nke estradiol.
Ịdọ aka ná ntị na Raw Estradiol Benzoate ntụ ntụ
Mmetụta mmetụta nke estradiol benzoate bụ otu ihe ahụ dị ka nke estradiol. Ihe atụ nke mmetụta ndị dị otú ahụ gụnyere obi ebere na mmụba, ọgbụgbọ, bloating, edema, isi ọwụwa, na melasma.
Ezigbo estradiol dị ka estradiol benzoate na-esi ngwa ngwa na-eme ka hydrolyzed prodrugs nke estradiol, mana enwere ogologo oge mgbe a na-eme ya na mmanụ site na intramuscular injection n'ihi nkwụsị nke mmịpụta acid fatty acid ha nwere. Dika ihe omuma nke estradiol, estradiol benzoate na estradiol esters bu estrogens.
Raw Estradiol Benzoate ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Estradiol Benzoate ntụ ntụ (CAS 50-50-0) site na AASraw
AAS raw na-enye 99% Estradiol Benzoate ọcha ntụ ntụ ka ọgwụgwọ mgbapụta maka ọgwụ ndị menopausal.
Estradiol Benzoate Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ: